About Us - Shanghai Beyond Case Co., Ltd
Tayada iyo adeegga waa qalbiga kasta oo aynu qabanayno. Maamulka Warshadda ayaa soo hagaagtay oo habeeyay tan iyo markii shirkadda maray sugida ee ISO9001: 2008 2014 alaabta All kulmi karaan shuruudaha caalamiga ah ee caadiga ah deegaanka, gudbin karaan baaritaanka tayada la xiriira sida ay gaaraan, ROHS, halogeen, CP65, MSDS, PFOS, PFOA, iyo booda sida uu sheegay looga baahan yahay qofka macaamilka ah.
Our warshad uu leeyahay shaqaale guud ee in ka badan 130, waxaa ka mid ah kooxda 10 qof ee R & D kooxda, warshad wuxuu daboolayaa meel ka mid ah in ka badan 4500 m2, leh afar workshops of Laminating, wax taaj oo kale iyo tolidda. Shaqadayada waxa haga afar qiyamka asaasiga ah:
Tayada -We nafteena faantaa on rating 100% ku qanacsan ka macaamiisheena. Heerarka tayada ay jariiradu waa qayb weyn ku sumcad our hogaamiyaha warshadaha ah ee design iyo wax soo saarka kiiska caadadii.
Innovation gabaabsiga ku hal-abuurka iyo hal-abuur, our geedi socodka horumarka gaar ah inoo siinaysaa in la abuuro xal in ay bixiyaan qiimaha ku daray la taaban karo macaamiisha our.
Halaynta – We believe in a long-term relationship and partnership with our customers, our dedication to quality custom EVA cases is one of the reasons why we enjoy such a high client retention rate.